Ndezvipi zvakanakira nekuipira eCommerce? | ECommerce nhau
Ndezvipi zvakanakira nekuipira eCommerce?
Claudi casals | | Zvidzidzo uye zviwanikwa
ECommerce rudzi runopokana kwazvo rwekutengesa urwo ruchakura zvisingaenzaniswi. Icho chiitiko chekushambadzira icho inoenderana nemitemo mitsva yemusika nemamiriro ezvinhu, iyo inopa mikana mitsva. Kuiziva kwazvo hazvisi nyore uye kudzidza kwakanaka kwemusika kunodiwa kuti unzwisise kana chigadzirwa chako chichisangana neprofile kuti chipinde mumusika nenzira iyi.
Asi sezvazviri mune zvese, kune mativi maviri emari, ziva zvakanakira nekuipira kushandisa eCommerce.
1 Huru buts uye zvakaipira ecommerce
1.1 10 Makomborero eEcommerce
1.2 10 Kukanganisika kweEcommerce
2 Mikana uye kugona
3 Ecommerce sechinhu chinodiwa
Huru buts uye zvakaipira ecommerce
Usati watanga, Izvo zvirinani kuve nechinangwa uye chaicho mufananidzo wezvinoreva kuzvipira iwe kune ecommerce (zvemagetsi zvekutengeserana). Iko kunyepedzera kunogona dzimwe nguva kutipofomadza kune kusagadzikana kwechimwe chinhu, sekusaziva kana kusavimba kunotitadzisa kuona zvinhu zvakanaka. Neichi chikonzero, isu tichaongorora gumi zvakanakira uye gumi zvinokanganisa ecommerce.
10 Makomborero eEcommerce
Iko hakuna kukwana kwenzvimbo, izvi imhaka yekuti network iri pasirese saka unogona kuwedzera bhizinesi rako chero kupi.
Iwe unogona kuratidza nekupa yakakura yakakura mhando yezvigadzirwa.
Mutengo wekutanga zvese uye kugadzirisa wakadzikira zvakanyanya pane mubhizinesi retsika bhizinesi.
Sevha nguva kana uchiita kutenga kune mutengi.
Iko kune kureruka kukuru mukuvandudza batch, coupon, uye nzira dzekushambadzira dzakaderera.
Unogona kupa rumwe ruzivo kumutengi.
Iko kune mukana mukuru wekupa iko kuri nani kuenzanisa kwezvigadzirwa nemitengo yavo uye hunhu.
Unogona kuva mukuru wako.
Iko hakuna muganho wenguva, kunze kwekunge uri munhu anoshanda zvakanyanya, zvinokutendera kuti uyananise mhuri yako zvirinani uye kugadzirisa basa rako kune marongero uye mutinhimira wehupenyu hwako.
Unogona kudhizairisa bhizinesi zvishoma, asi iwe unogona kugara uine 100% pamhepo uye zvemagetsi, izvo zvinoderedza mutengo kumatanho anotengeka chaizvo pamabhajeti ese
10 Kukanganisika kweEcommerce
Makwikwi acho ari akakwirira nekuti chero munhu anogona kuvhura iyi mhando
Kune vatengi vanofarira kuona chigadzirwa vasati vatenga uye vanofungira
Haasi ese zvigadzirwa anogona kutengeswa online neakareruka zvakafanana.
Mari yekutumira inogona kudhura zvakanyanya kana vhoriyamu iri diki.
Kuvimbika kumutengi kwakanyanya kuoma nekuda kwenzvimbo dzakasiyana siyana dzemakwikwi.
Kuchengetedzwa kwenzvimbo kunogona kupa vangangove vatengi mibvunzo yakawanda.
Vatengi vanoda yakanakisa mutengo uye yakanakisa sevhisi uye zvinonetsa kuwana
zvese nguva dzose.
Kana iwe uchijaira kuverengera, zviri nyore kwazvo kutsauswa nezvimwe zvinhu kana mabasa, kunyanya kana
uri kumba. Chirango chakanaka chakakosha.
Iko kune njodzi yekurwiswa kwekubiridzira (kuba makiyi uye mapassword) uye zviito
Kana peji rako (kana sevha) rikaenda pasi, haugone kupa izvo zvauri kutengesa, kurasikirwa
Kusashivirira kwemutengi. Muchitoro chaicho, chero kusahadzika kana mubvunzo unogona
kupindurwa ipapo ipapo, zvinopesana nezvinowanzoitika online.
Saizvozvo, iyo nguva yekutenga chigadzirwa haisi yekukurumidza, uye kana a
munhu ari kukurumidza, anogona kutofunga kusatenga chigadzirwa nekuda kwenguva dze
Mikana uye kugona
Ini pachangu, imwe yeakanyanya kukosha mapoinzi (uye kubudirira) yeecommerce. Semumabhizimusi epanyama uye echinyakare, ecommerce inotibvumidza kuti tiite zvatinazvo mupfungwa. Asi chikonzero chikuru apa chiri mukati mukana wekushandisa zano nderekuti kazhinji rinokurumidza uye rakachipa. Ichi chokwadi chinosiyanisa chinotibvumidza ku "pfura" zano pasina kuisa panjodzi kuyedza kana capital zvakanyanya sezvingave zviri mubhizimusi repanyama.
Kana tikakanganisa, tinogona kuongorora kwatinenge takundikana, kana kuti pfungwa yedu yanga isinganakidze veruzhinji sezvaive kwatiri. Iko mukana wekukundikana kana tikaenda "hunyanzvi" hwakakwirira, ichi ichokwadi, asi zvakare ichokwadi kuti tine budiriro yatisingatarisiri. Y hapana chinhu chiri nani kunze kwekubudirira mune chimwe chinhu chaunodawo.
Tinogona kuwana mienzaniso yerudzi urwu munzvimbo zhinji. Vanhu vaifarira kufamba uye ikozvino vakazvipira kufamba nyika, vachitora zvavanoona uye mifananidzo yedzimwe tsika pamapeji avo, vachipa kuraira uye vachigadzira yechokwadi hurukuro tambo dzakatungamira mukusimudzira zvigadzirwa zvavasina kana kutarisira ... ecommerce izvo vakawana vanhu vane chipo chakakosha, uye kuti pamwechete vakabudirira. Chokwadi nyaya yakafanana neiyo yandinotsanangura ichauya kuzouya mupfungwa, uye ndeyekuti pakutanga ivo vakatanga seizvi. Nekudaro kukosha kwekuva iwe uye kusunungura kugona.
Ecommerce sechinhu chinodiwa
Iwe unenge wakamboverenga kuti haasi ese mabhizinesi anogona kana kuda kuve nepamhepo kuvepo. Kunyangwe chirevo ichi chiri chechokwadi, chave kushoma uye kushoma kukosha sekufamba kwemakore. Kwete chete digitization asi shanduko yepasirese padanho rezve tekinoroji inotyaira uye inobatsira kukura kuri kuenderera kwekutengeserana kwemagetsi Imwe data yakakosha kuti unzwisise kukosha kwekukura ichave inotevera:
Muna 2018, ecommerce muSpain yakanga iine rekodhi nyowani, zviuru makumi mana emamiriyoni euros.
Ivhareji yekuwedzera kwegore iyo vanhu vanoshandisa pamhepo inowedzera neinosvika makumi maviri muzana.
Zvizvarwa zvakawanda zvirikushandisa internet kwete chete kutenga zvigadzirwa, asi kunyangwe kuwana ruzivo, kurairwa, kana kutsvaga nzvimbo yebhizinesi. Kunyangwe padyo nepadyo, zvisati zvamboitika kudiwa kwekukurumidza
Kunze kwekuyera zvakanakira nekuipira izvo zvatinogona kuwana muecommerce, iyo yegore data inoratidza shanduko muitiro mukushandisa kuri kuzvimisikidza uye zvinoita sekunge kuri kudzosera kumashure. Saizvozvo, ecommerce iri kuzvimisikidza pachayo, nekukurumidza, uye mazuva ese inobata nekubata zvikamu zvataisatarisira kare. Sokunge sekuzvimiririra, nyika yaive ichivandudzwa nenzira yakafanana, asi nehunhu hwakasiyana chaizvo hwatisingazombofungira mune dzimwe nguva. Kubva pakuwana mumwe munhu munguva chaiyo, kusvika kunyangwe mari chaiyo.
Ose mabhizinesi ekutanga-kumusoro ane mavambo akaoma, uye kana zvasvika kune indasitiri, zvakafanana zvinoitika, iine yakati kurei yakareba yenguva. Izvo zvakajairwa, uye zvakajairwa, nekuti sumo yechimwe chinhu inofanira kupfuura nemazhinji ezvitoro, uye yega yega inofambira munzira yayo. Ecommerce haina kusara, kunyangwe kuwedzera kuri kukurumidza zvakanyanya kana ichienzaniswa nedzimwe nguva, nekuti internet inobatsira kufambidzana pakati pemakambani nevatengi. Kushandisa mikana iyi kunotitora isu tiende munyika yezvingaitika izvo kusvika parizvino zvaive zvakatadziswa. Asi isu tichafanirwa kuve nemoyo murefu uye nekuzvidavirira, nekuti iwo maitiro uye manejimendi erudzi urwu rwekutengesa haisi iyo yakajairwa imwe futi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Zvidzidzo uye zviwanikwa » Ndezvipi zvakanakira nekuipira eCommerce?
Maitiro ekuwedzera bhizinesi nekushandura iyo brand mufananidzo